Cumar Cabdirashiid: “Soomaaliya waxay ahayd inay taageerto xulafada Sacuudiga” – Balcad.com Teyteyleey
Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa waraysigii u horeeyey bixiyey tan iyo markii looga adkaadey Doorashadii Madaxweynaha ee Soomaaliya ee dhacdey Feberaayo 2017.
Idaacadda VOA oo uu waraysi siiyey ayuu Dowladda Soomaaliya ku dhaliiley in ay qaadatey mowqif dhex-dhexaad ah oo aysan yeelin dalabkii uga yimid dalalka Imaaraadka iyo Sucuudiga ee ahaa in ay goyso xiriirka Qatar ama hoos u dhigto.
Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in meesha waxa is hayaan ay yihiin dalal Soomaaliya weligeed xiriir la lahayd Sucuudiga, Imaaraadka iyo Masar iyo dal yar oo Qatar la yiraahdo oo aan Soomaaliya wax u qaban ayse dhici karto in ay shakhsiyaad wax u qabteen, sidaas darteed waxay ahayd in Soomaaliya taageerto mowqifka xulafada Sucuudiga, taas ayaana dantu ku jirtey ayuu yiri.
Raysal Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in go’aanka Dowladda Farmaajo qaadatey dhibaato ay u keeni karto dalka. Mowqifka dhex-dhexaadka ah ayuu ku tilmaamey in loo fasirtey mid ay ku taageertay dalka Qatar. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Cumar Cabdirashiid xiriir dhaw la leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo si weyn ugu taageeray doorashadii Madaxweynaha Soomaaliya.
Go’aanka Soomaaliya qaadatey ee ah dhex-dhexaadka ayaa ah mid si weyn loo soo dhaweeyey oo ah go’aanka ay wada qaateen dalalka caalamka oo dhan marka laga reebo dalal ay si weyn u maalgeliyeen dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadku kuwaas oo ilaashanaya danahooda gaarka ah ay xiriirkii u jareen Qatar.
Soomaaliya ayaa xiriir ganacsi la lahayd Imaaraadka iyo Sucuudiga waxaana muddo sanadooyin ah xirnaa dhoofka xoolaha Soomaalida, Dalalka Khaliijka ayaan dhamaantood wax muuqda ka qaban nabadda Soomaaliya iyo horumarka.
The post Cumar Cabdirashiid: “Soomaaliya waxay ahayd inay taageerto xulafada Sacuudiga” appeared first on Ilwareed Online.